» भयावह संक्रमणले बाँके रोइरहेको छ, चित्कार सुन्ने फुर्सद छैन मुख्यमन्त्रीलाई
भयावह संक्रमणले बाँके रोइरहेको छ, चित्कार सुन्ने फुर्सद छैन मुख्यमन्त्रीलाई
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले काठमाडौमा शिलान्यास भएको एमाले मुख्यालयको अलिशान महलको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहँदा प्रदेशकै एउटा जिल्ला बाँकेको अस्पतालहरुमा एक सर्को अक्सिजन नपाएर कोरोनाका बिरामीहरु फुक्लु फुक्लु मृत्युवरण गरिरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले धरहराको फोटो पोष्ट गरेर प्रधानमन्त्रीको भजन गाईरहँदा बाँकेका फ्रन्टलाइनर स्वास्थकर्मीहरुले कोरोना संक्रमणले छट्पटाइरहेका संक्रमितलाई अस्पतालका बेड दिन नसकेकोमा भोगेको पीडा सामाजिक सञ्जालहरुमा पोष्ट गर्दैछन् ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो महामारीले बिकराल रुप ग्रहण गरिरहँदा बाँकेको अवस्था दर्दनाक बनेको छ । कोरोना उपचारका लागि तयार गरिएको भेरी अस्पतालका सबै बेडहरु भरिभराउ मात्र छैनन् अस्पतालका बरण्डा, चोटा र आँगनमा समेत संक्रमितहरु एक सर्को अक्सिजन सुँघ्न पाइन्छ कि भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । भएका सबै भेण्टिलेटरहरु प्याक छन्, अक्सिजन जोडिएका सबै बेडहरु भरिएका छन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरु गल्लीमा समेत संक्रमित राखेर उपचार गरिरहेका छन् । उपचारकै क्रममा अस्पतालकै आधा स्वास्थ्कर्मी संक्रमित हुन पुगेपछि अस्पतालमा जनशक्तिको समेत अभाव देखिएको छ ।
उता नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा समेत कोरोना वार्ड भरिएर थप बिरामी आए उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा। नितेश कनोडिया स्वयम अस्पतालमा बिरामी फर्काउनु पर्दाको पीडा सुनाउँछन् । सिकिस्त भएर आएका संक्रमितलाई समेत बेड छैन भनेर फर्काउनु पर्दा नराम्रो लाग्ने कनोडिया बताउँछन् ।
भेरी अस्पतालको अवस्था त नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ । अस्पताल प्रमुख डा। प्रकाश थापाले अस्पतालका सबै बेड भरिएको र थप बिरामी उपचारका लागि आउँदा मुकदर्शक भएर बस्नुबाहेक अन्य उपाय नभएको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिसकेका छन् ।
बाँकेबाटै पहिलो महामारीमा खटिएका कोभिड हिरो नरेशबाबु श्रेष्ठले राज्यका सबै अंंगहरु कोरोका विरुद्ध परिचालन गर्न नसकिए हेर्ने नसकिने भयावह रुप आउन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । हरेक स्थानीय पालिकामा कम्तीमा २५ बेडको अक्सिजन सहितको आइशोलेसन बनाउन नसक्ने हो भने स्थिति झन दर्दनाक बन्ने श्रेष्ठले खबरकुरालाई बताए ।
अहिले पनि बाँकेमा हरेक दिन ३ सय बढी थपिने र हरेक दिन कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु हुने घटना बिगत १ हप्तादेखि चलिरहेको छ । पछिल्लो समय संक्रमित भएर आएका अधिकांस संक्रमित गम्भिर प्रकृतिका र अक्सिन वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने खालको रहेका स्वयं चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २५ बेड सम्मको अक्सिजन सहितको उपचारकेन्द्र स्थापना गर्ने तयारी अवस्थामा रहेपनि उपयुक्त स्थान नपाएको जनाएको छ । भेरी अस्पतालसँग स्थान माग गरिएपनि भवन नपाएका कारण तयारी अवस्थामा रहेको अक्सिजन सहितको बेड संचालनमा ल्याउन नसकिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उप प्रमुख उमा थापाले बताईन् ।
प्रशासनले लकडाउन घोषणा गरेर कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न खोजे पनि सिकिस्त बनिसकेका संक्रमितको उपचारमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । बाँकेमा जसरी कोरोना संक्रमणले माहामारीको रुप लिएको छ त्यस अनुपातमा यस पटक न त स्थानीय पालिकाहरु तात्तिएका छन् न प्रदेश र संघीय सरकारले बाँकेको सम्बेदनामा ध्यान दिएका छन् । बाँकेमा अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाईरहँदा प्रदेश सरकारमा भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्यमन्त्री लिला गिरी भने एमाले बैठकका लागि काठमाडौ उडेका छन् । खबरकुरासँग कुरा गर्दै मन्त्री गिरीले यस्तो महामारीमा निजी अस्पतालहरुको भुमिका बढी हुनुपर्ने बताए । हरेक पालिकामा उपचारकेन्द्र स्थापना गर्ने पहल हुँदै गरेको जानकारी गराउँदै गिरी काठमाडौं प्रस्थान गरे ।
विश्वमै दयालु स्वभाव भएको नागरिकको संज्ञा कमाएको नेपालीमा के पछिल्लो समय मानवीय सम्वेदना हराएकै हो त ?
अक्सिजन सुँघ्न नपाएर फुक्लुफुक्लु संक्रमितले ज्यान गुमाईरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा धरहरा र मुख्यालयको महल पोष्ट गर्न कसरी सके होलान् ? आफ्नै प्रदेशको एउटा जिल्लामा उपचार नपाएर कोरोना संक्रमित सडकमा ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुग्दा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पार्टीको बैठक कति प्यारो लाग्यो होला ? लाग्छ रोम जलिरहेको निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ ।
फोटौ : सामाजिक सञ्जालबाट